Soo dejisan Internet Explorer 11, 10 iyo 9 – Vessoft
WindowsInternetkaDareemaha WebkaInternet Explorer
Bogga rasmiga ah: Internet Explorer
Internet Explorer – browser asaasi ah nidaamka qalliinka ka Microsoft. software wuxuu taageeraa ah tallaabooyinka ugu waaweyn ee la tabs, waxay bixisaa in ay si joogto ah websites booqday helaan degdeg ah oo awood u furo tabs filaan ah u xiran yihiin. Internet Explorer ilaaliya user ka dhanka ah websites khatar ah oo ku jira hab joogis gaarka ah online. software wuu awoodaa inuu beddelo size font iyo style of pages internetka. Internet Explorer u saamaxaaya in ay astaysto fursadaha browser aad u baahantahay shakhsi ah oo ku xira ku daro ama goobaha kala duwan ka daalacashada kale.
Automatic mooyee of tabs
Soo dejisan Internet Explorer
Faallo ku saabsan Internet Explorer
Internet Explorer Xirfadaha la xiriira